Learning Tips – SLD EDUCATION
Q: Enlgish ကို ဘာလိုသင်သင့်လဲ? English ဆိုတဲ့ သူတစ်ပါးရဲ့ ဘာသာစကားကို ဘာလို့သင်ဖို့အားပေးလဲ ဆိုပြီး မေးချင်စရာတော့ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသင်ရဆုံးအလွယ်ဆုံး၊ အသုံးရအလွယ်ဆုံး ပညာရှာရမှာလည်း အသုံးဆုံးက မြန်မာစကားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ချင်းလူမျိုးဖြစ်နေမယ်၊ ကချင်လူမျိုးတွေနဲ့လည်းအရမ်းခင်တယ်…ဒါပေမဲ့ ဦးစားပေး သင်ရမှာက မြန်မာစာပါ။ လောလောဆယ် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး လူမှုရေးတို့ပိုင်းမှာ အသုံးရဆုံး၊ တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံလို့ရတဲ့ စကားမိုလို့သင်သင့်တာပါ။ English ဘာသာစကားလည်းအတူတူပဲ။ ပညာသင်မယ်၊ နိုင်ငံခြားကလူတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်မယ်၊ လူမျိုးတိုင်းနဲ့ စကားဖလှယ်မယ်၊ internetမှာ info/research Read More …
How to get started?(အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လို စလေ့လာရမလဲ)Leaveacomment